Diyaarad siday Sheekh Mukhtaar Roobow oo gaartay magaalada Muqdisho | SAHAN ONLINE
Diyaarad siday Sheekh Mukhtaar Roobow oo gaartay magaalada Muqdisho
MUQDISHO – Wararka aan ka helayno garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho soo caga dhigatay diyaaradii siday Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur taasoo kasoo qaaday degmada Xudur halkaasoo uu saaka iska dhiibay.
Diyaarada siday Roobow ayaa waxaa la saarnaa Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya iyo Taliye Kuxigeenka NISA iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ,iyadoona amniga Roobow ay la wareegeen Ciidamada gaarka ah ee Nabadsugida.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya halka la geynayo Wadaadka ,iyadoona aysan weli dowladda Soomaaliya si rasmi ah arrintiisa uga hadlin,illaa maalintii Arbacadii ee Al-Shabaab weerarka ku qaaday.
Sahan Online ayaa ogaatay in Abuu Masuur la kulmayo mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku sugan Muqdisho.
Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa saaka kulan gaar ah ka yeeshay xaalada Abuu Mansuur oo si rasmi ah galabta loogu soo gacan geliyey dowladda Soomaaliya.
Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa sanadkii 2013 gooni uga baxay Al-Shabaab kaddib markii ay is khilaafeen Hoggaamiyihii hore ee Al-Shabaab Axmed Godane,iyadoona xilligaas wixii ka dambeeyey uu ku gabaadsanayey deegaanka uu ku dhashay ee Abal oo ka tirsan gobolka Bakool.